The Best Things To Do ELondon Futhi How To Get Kukhona | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuvakasha UK > The Best Things To Do ELondon Futhi How To Get Kukhona
(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/09/2021)
Uma kuziwa ngokuvakashela dolobha ezidumile kunazo zonke eYurophu, ILondon ngokungangabazeki iphezulu ohlwini lwabo bonke abavakashi futhi kunezinto eziningi okufanele zenziwe eLondon. Lifanele libe eside, umlando othakazelisayo; izimpawu zendawo amahle zokungcebeleka; futhi kukhona izinto ezimnandi nezinto ukwenza khona. Noma ngabe kulula Kwenzekani izivakashi ofuna ukumazi wendawo isiko, noma owenza befuna injabulo, London inokuthile esitolo ngawe.
Kunjalo, ngaphandle kokwazi ukuthi senzenjani eLondon, kubalulekile ukuthola Logistics ikhambo lakho. Ukuthola lapho ngesitimela ingenye ongakhetha kakhulu zemvelo, ikakhulukazi uma uhamba kusukela emadolobheni amakhulu European like Paris, Amsterdam, noma Berlin. Nakhu ukubuka konke kwemisebenzi London nezitimela eyokusiza ukuhlela iholide lakho:
Lesi sihloko yabhalelwa fundisa ngeTravel futhi kwenziwa ngu Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Izinto wethu ayizintandokazi Ukwenze eLondon
Emzini zizinkulu London, olugcwele phansi luhla lwemisebenti lokumele ezimbalwa ongakhetha cishe kungenakwenzeka. Awukaze uzobona wonke izinto ukubamba zonke eyiqiniso London nakho ekuhambeleni okukodwa. Yingakho sincoma sihlela izinto eziza kuqala yakho kusengaphambili.
Okwalabo abafuna Izinto Zokuzenza eLondon ezihlobene yezitolo, izimakethe ezahlukene kuyoba ukugqamisa ngokuvakasha wakho. Ingabe ufuna eyiqiniso, ukudla lendawo? Hlola Borough Market isampuli yayo okujabulisa ukudla, noma udle kwelinye zokudlela eziseduze. Uma ungumuntu kwemizwa kwabanye yezitolo umnyango esitolo, Liberty liyindawo enkulu. Kungenjalo, hamba abazingela ezinye kwakudala cool ngesikhathi Portobello Road Market.
Uma uhambo lwakho eLondon iba uhlamvu zemfundo, vakashela ezinye ezidonsela nezamasiko. Kusukela ukuya kabusha KaShakespeare Globe ekuzihloleni Tower of London, uzoba kokukwenza. Singathanda futhi bancoma ejabulela yobuciko wesimanje ngesikhathi Tate Modern ku South Bank, kanye ngokuvakashela Southbank Centre.
Utrecht eLondon Izitimela
Strasbourg eLondon Izitimela
Ukufika eLondon ngesitimela usuka eParis, Amsterdam, nase-Berlin
Ungakwazi ukufinyelela eLondon zivela Paris, Amsterdam, futhi Berlin kalula nge Eurostar, kwamadolobha, nezitimela zikaThalys. Ezinye izindawo kokuqala kuyodingeka ngendlela ejwayelekile nakakhulu lokuthi nakanjani uyofika London kunabanye. Ngokwesibonelo, ungakwazi kugitshelwe Eurostar ngesivinini oqondile ukuqeqesha ezilethwa eLondon zivela Paris, futhi kube khona ngesikhashana esingaphezudlwana amahora amabili nesigamu.
Uma kuziwa ukuhamba ezilethwa eLondon zivela Amsterdam, nase-Berlin, Kusukela Amsterdam, ungathatha i-Eurostar ngqo noma enye inketho enhle kungaba ukufika kuqala eBrussels nge Thalys bese ugibela Eurostar e Brussels eLondon. I uhambo kuthatha cishe amahora amane ngaleyo ndlela futhi kuyindlela esheshayo ukufinyelela London kusukela Amsterdam ngesitimela.
Ukuthola enhlokodolobha UK kusukela Berlin ngesitimela kuzodinga izinguquko ezimbili. Ingxenye yokugcina yalolu hambo kuyafana kusukela Amsterdam, bese egibela Eurostar. Nokho, enye inketho ukuqeqesha ukuhamba usuka eBerlin uye Cologne, lapho ubungenza bagibele isitimela Brussels. Ikona isitimela esheshayo ukusuka eBerlin kuya eLondon futhi kuthatha okuncane ngaphansi kuka 10 amahora bese wenza zonke izinto ozifundile ngezinto okufanele uzenze eLondon.
Uma usukhethe ukuthi izinto zakho ozithandayo ukwenza eLondon kuyoba, udinga kuphela ukwenza uhambo! Ukuthola lapho ngesitimela kulula, ngakho hamba ukubhuka izihlalo zenu, kube kumnandi iholide.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#imvuouli europetravel London Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uktravel